bhimphoto: February 2010
लामा सफरमा निस्कदा धेरै परिवार आफुलाई चाहिने खान्की बोकेर हिडेका देखिनु नौलो छैन । यसका कारण छन् - आफुले लगेका खानेकुरा सफा र सन्तुलित हुन्छ । अनि बाटोमा खर्चको बचत पनि हुन्छ । यस विपरीत हतारका यात्रु धेरैले खाना बोकेर हिड्दैनन् । बाटामा होटल र पसल थापेकाहरु को आउला र खाइदेला भनेर कुरिरहेका हुन्छन् । किन खाना बोकिरहने भन्ने सोचाइ हुनुले पनि यस्तो भएको होला । मलाइ पनि त्यस्तै लाग्छ ।
गत बिहीवार काठमाडौंबाट विराटनगर फर्कदा रात्री वसको यात्रानुभव निकै पछि फेरि नजिकबाट गर्न पाइयो । यात्रा गर्दा मेरो नियमितता समयमा टिकट लिने, सवारीको सीट र चढने ठाउ निश्चित गर्ने भन्ने छ । तर, यो यात्रामा त्यस्तो हुन पाएन । साथीहरुले कलंकी गएर चढे आधाभन्दा सस्तो भाडा तिरेर जान सकिन्छ भन्ने साथीहरुको सल्लाहमा यसपटकको यात्रा भयो । हो रहेछ, अग्रिम बुकिङ गर्दा सात/आठ सय नछाडने बसका टिकट काउन्टरको नियमलाई कलंकीले मात खुवाउने रहेछ । यहा 'बार्गेनिङ' गर्न सक्नेहरु तीन सयमात्र तिरेर पनि यात्रा गर्न सक्ने रहेछन् ।
अग्रिम बुकिङ भएका टिकट बाहेक बचेका सीटलाई गाडीलाइनका रैथानेहरुले जतिमा भएपनि गुडाउन सक्ने क्षमता राख्ने रहेछन् । शायद हवाइजहाजले पनि यही चलनलाई अपनाएको होला । बिक्री हुने टिकटमा दह्रो रकम लिने, जोगिएका भए त्यसलाइ अलि कम रकम लिएर पनि खाली जान नदिने । क्या मज्जा ।
साढे चार सयबाट घटाउन सकिएन । सीट पाइयो । गाडी गुडयो । उसले रोक्ने ठाउहरु कस्ता हुन्छन् भन्ने अभ्यस्त यात्रुका लागि नौला थिएनन् । यद्यपि बसको लामो सफर निकै समयपछि फेरि जुरेको थियो । काठमाडौंबाट छुटने र त्यहा पुग्ने यात्रु बसले पुरानो बानी छाडेनन् छाडेनन् , बाटाका होटल पनि उस्तै रहेछन् ।
झण्डै १५ घण्टाको यात्रामा बस १४ ठाउँ अडियो । रातीको खानाका करीव १० बजे लागि चितवनको रामनगरमा रोकियो । हामीले होटलको खाना खाएनौ । धेरै यात्रु उस्तै थिए । बाहिर बसेर चाउचाउ उमाल्न लगाएर खाने । हामीसँग रहेका संजीव कालाखेती भाइले खाना खाए । १२५ मा मासू-भात । हात चुठेर आएपछि उनले खानामाथि शंका गरे । खाइसकेपछि गरेको शंकाले विसञ्चो गरछ । उनलाई खाएपछि शंका नगर्न सल्लाह दिइयो ।
करीब आधा दर्जन खानाका होटल खुला देखिएका रामनगर वर्षौ पहिले देखेजस्तै रहेछ । खानाको मेलो अघि घुमेर हेर्दा होटलले घर बनाएपनि खानाको गुणस्तर र सफाइमा ध्यान खासै पुर्‍याएको देखिएन । यात्रुले बुझेको कुरा के हो भने बस जहाँ रोकिन्छ, त्यहाँ चालक र बस कर्मचारीले ज्वाइलाई जस्तो सम्मान पाउछन् । भनेजस्तो खाना पाउछन् । हुन त बदलिदो समयमा यो मार्केटिङकै नियम हो । यात्रु चाहि सिकार गर्न भेटिएको जन्तुजस्तो मानिन्छ । चलन फेरिएको रहेनछ । यात्रुहरुका अनुसार राजमार्गमा हाम्रो यात्रा पछिल्ला केही महिना दिउसोभन्दा राती रमाइलो छ । कारण, बन्द हड्ताल र अवरोध झेल्ने समस्या रात्री यात्रामा केही कम हुन्छ । तर, यात्रुका लागि उपयुक्त खान्कीको व्यवस्था गरे आफ्नै होटल खोज्दै उनीहरु आउलान भन्ने सञ्चालकले अझै बुझेका रहेनछन् ।
कोसीब्यारेज आइपुग्नुअघि करीब साढे पाच बजे बस बुढोको पेडा पसल अघि रोकिएको रहेछ । सप्तरीको बरमझियाको त्यो सानो पसलमा पेडसगै चिया-नास्ता पनि थियो । रातभरको थकानमा परेका यात्रुले ठूलो भाडोमा उमालेको 'होलसेल' चियामा चित्त बुझाए । गाडी स्टाफका लागि सानो भाडोमा बेग्लै चिया बनाइने रहेछ । दसकअघिका यात्राभन्दा यो यात्रामा पनि अनुभव फरक भएन । सुध्रेको छैन बाटाको खाना र होटलवालाको बानी ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:51 PM
2 comments: कतै शेयर गर्ने की ?
विहानै फोन आयो 'मलाइ चिन्नु हुन्न होला । झट्ट आउनुपर्‍यो ।' सञ्चारकर्मीका लागि यस्ता फोन नौला होइनन् । हरेकलाइ लाग्छ उसका अघि भएका समस्या या घटना सबैभन्दा ठूला छन् । सञ्चारमाध्यमका लागि ती सेलेबर समाचार बन्न सक्छन् । यही अपेक्षाले गरिएका फोन कहिलेकाही काम लाग्ने हुन्छ ।
हिजो विहानको कुरा हो । मेरो घर भएको ठाउँबाट करीव ४ किलोमिटर पश्चिम विराटनगर-१६ दरहियामा डाकाले चौपाया लुटेछन् । गोली चलाएछन् । त्यो गाउँ पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र तालिम केन्द्रभन्दा करीव ५ सय मिटरमात्र पश्चिममा छ । शनिवार मध्यरात भएको घटनापछि एकजना गाउँले घाइते रहेछन ।
म त्यहाँ पुगे । डाकाले महेश यादव भन्नेको दुइवटा गोरु र एउटा भैसी लगेछन् । गोलीले महेशका दाजु उदीचन घाइते भएका रहेछन् । उनको दाया पाखुरामा गोली लागेको रहेछ । चोरी होला भन्ने डरले गुहालीमा सुतेका उनी गोरु फुकाएको आवाजले ब्युँझेछन् । हल्ला नगर्न दिएको चेतावनी नमान्दा लुटेरा समूहले गोली चलाएको रहेछ ।
दरहियाबाट दक्षिण बाटो नछोडी गयो भने इण्डिया पुगिन्छ । खुला सीमाना हुनु जति फाइदा छ , यसमा सुरक्षा व्यवस्था उपयुक्त नहुदा यस्ता लुटपाटका घटनाको त्रास पनि उत्तिकै छ । दुइ राउण्ड गोली चलाएपछि भएको हल्लापछि डाकाले धेरैजनाको मालवस्तु लैजान पाएनन् । तर, उनीहरुले फेरि आउने चेतावनी दिइगएको गाउँलेले बताए । सडक, फोन र बिजुली भएको यो गाउँ । गाउलेले बताए - इलाका प्रहरी रानीलाइ घटना भइरहँदा फोन गरियो । १०८ नम्बर फोन उठेन । अनि १०० डायल गरि जिल्ला प्रहरीलाइ भनेपछिमात्र घटनाको ४५ मिनेटपछि सुरक्षाकर्मी आए ।
१०८ किन उठेन भन्दै आक्रोशितलाइ मैले बताउनु पर्‍यो । त्यो एरियाको टेलिफोनको तार चोरी भएको एक हप्ता भयो । मेरो घरमा पनि ल्याण्डलाइन फोनमा त्यही कारण डायलटोन छैन । धन्य मोवाइल । बेला बेला सम्पर्क टुट्तै पनि सम्पर्क हुन्छ ।
विराटनगरको मिल्सएरिया क्षेत्र डेढ दसकअघिसम्म जस्तो थियो । अहिले छैन । यहाका १५ मध्ये १२ कारखाना बन्द छन् । मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुटमिल कहिल्यै पुन नखुल्ने गरि बन्द भएको छ । कारखाना बन्द भएपछि यस क्षेत्रमा कामको खोजी गर्नेहरु पलायन भएका छन् । त्यसैले दरहिया पनि पछि परेको छ । गाउँलेका भनाइमा वितेका १५ वर्षमा यो गाउँले यस्ता १३० वटा घटना भोगेको छ । जसमध्ये गत वर्ष नराम्रो घटना थियो । डाकाले लोग्नेलाइ बाधेर श्रीमातिलाइ उनकै अघि बलात्कार गरेका थिए ।
सीमानासँग जोडिएका नेपाली बस्तीमा सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्नु आवश्यक छ । दरहियाजस्तै धेरै गाउँको खबर आउदैन । गाउले सहन्छन । व्यवहार चलाउँछन् । मुलुक यसरी नै चलेको छ ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:22 PM
विराटनगर/ हावाको बेगसँग कुरा गर्ने गति । बलियो, छरितो बनोट र चाहेजस्तो रंग । युवा चाहना यस्तो छ नयाँ बाइकप्रति । विराटनगरको धरान रोडस्थित लक्ष्मी टे्रडिङ हाउसका सञ्चालक सुवास आचार्य भन्छन् 'उमेर अनुसार कस्टमरको बाइकप्रतिको हेराइ हुन्छ ।' उनका अनुसार युवा आगन्तुकको सोधखोज १५० सीसी र त्यसभन्दा बढि 'पावरफुल' बाइकमा केन्द्रित छ । हिरोहोण्डाले भर्खर बजारमा ल्याएको २२३ सीसीको करिज्मा जेडएमआर मोटरसाइकलका विषयमा युवाले धेरै चासो राखेका छन् ।
बजारमा चलेका बजाजको पल्सर,होण्डाको युनिकर्न, टीभीएसको अपाचे र यामाहाको एफ-जेड, फेजर र सुजुकीको जीएस-१५० आरलाई चूनौति दिदै हिरोहोण्डाले करिज्मालाई क्षमता थपेर बजारमा उतारेको हो ।
उक्त बाइक भारतमा बिक्री सुरु भएको दुइ महिनापछि नेपाली बजारमा आइपुगेको छ । आचार्यले माघको दोस्रो साता विराटनगरमा भएको विराट एक्स्पो व्यापार मेलालाई ध्यानमा राख्दै जेडएमआर काठमाडौं आएलगतै झिकाएका हुन् । स्प्लेन्डर मोटसाइकल हिरोहोण्डाको सबैभन्दा बढि बिक्री भएको मोडल हो । बिक्री एक करोडवटा नाघेको अवसरमा कम्पनीले निकालेको 'स्प्लेन्डर ओसिएसइ', सुपर स्प्लेण्डर,ग्ल्यामर र सीबीजेड पनि उनको शोरुममा छ ।
गच्छेअनुसारको लगानीमा चलाउन मिल्ने दुइ पाङ्ग्रे इन्जिनयुक्त सवारी राजधानीजस्तै पूर्व क्षेत्रमा पनि हरेक वर्गको अनिवार्य साधन बन्न थालेको छ । जहा सडक पुगेको छ, त्यहा मोटरसाइकल कुदेकै देखिन्छ । वर्षेनी बिक्री बढेको बजारमा बाइक रुचाउनेहरु उमेर र प्रयोगले फरक-फरक मानसिकतामा भेटिएका छन् । कम इन्धनमा बढि काम लिन सकिने, सर्भिसिङको झन्झटमा पर्न नचाहने र पछि बेच्नुपरे राम्रो मूल्य पाइयोस् भन्ने एकथरि छन् । अर्काथरी राम्रो बनोट र पावरफुल बाइक रोज्न मन पराउछन् । पावरफुल बाइक मन पराउनेमा युवा पुस्तामात्र छैनन् । उनीहरु बराबरी नै एउटा बाइक लामो समय कुदाएपछि पुरानोको तुलनामा केही शक्तिशाली सवारी गर्न चाहनेहरु पनि छन् ।
यामाहाका बाइक विक्रेता विराट अटो इन्टरप्राइजेजका विनय झा भन्छन् 'बाइकको बजारमा प्रतिष्पर्धा कडा छ । तर,कस्तो किन्ने भन्नेमा ग्राहक पहिल्यै निश्चय गरेर हिडेका हुन्छन् ।' यामाहाको १०६ सीसीको अल्बा रोज्ने र १५३ सीसीको फेजर मन पराउने ग्राहकको धारणा धेरै फरक पाएको झाको अनुभव छ । 'अहिलेको डिमाण्ड १५३ सीसीको गाडीको हो , उनले भने 'शोरुम सबैले घुम्न सम्भव होला नहोला, मेलामा धेरै भिजिटरले ब्राण्डअनुसारको फिचरबारे जानकारी पाए ।' विक्रेताका हकमा तुरुन्त अपेक्षित परिणाम आउने नदेखिएपनि जे भएपनि उपभोक्ताका लागि कुन मोटरसाइकल किन्दा ठीक हुने रहेछ भन्ने धारणा बनाउन मेला सहयोगी भएको बुझाइ व्यावसायीमा भेटियो । विराट अटोको शोरुममा अल्बा, ग्लाडिएटर,इन्टाइसर, एफ-जेड, फेजर र जीम स्कुटर छन् ।
बजाज ब्राण्डका मोटरसाइकल बेच्दै आएको सिंहल ब्रदर्सको शोरुममा विभिन्न क्षमताका पल्सर र डिस्कभरका नया मोडल छन् । बजार प्रबन्धक भुवन अधिकारी भन्छन् 'पल्सरको २२० सीसीलाई युथहरुले मनपराएका छन् ।'
बजाजले ल्याएको १०० सीसीदेखि २२० सीसीसम्मका बाइकहरुमा पल्सरमात्रै १५०,२०० र २२० सीसीमा फरक क्षमताका तीनवटा छन् । अधिकारी भन्छन् 'पावरफुल बाइक धेरै बिक्री भएको छ ।'
जापानिज कम्पनी सुजुकीका बाइकहरु बेच्दै आएको नर्वदा टे्रड कन्सर्नमा १२५ सीसीभन्दा कम क्षमताका बाइक छैनन् । नर्वदाका सञ्चालक कृष्ण पोखरेल भन्छन् 'अहिलेको बजार नै पावरफुल गाडीको हो ।' सुजुकीले ल्याएको १५० सीसीको जीएसआइ बजारमा चलेका अन्य ब्राण्डलाई चुनौति दिने मोड भएको उनले बताए । सुजुकीको एक्सेस स्कुटर पनि १२५ सीसीको छ । १ लाख ४२ हजारदेखि १ लाख ४८ हजारसम्मका बाइक राखिएको उनले बताए । युवाहरुले चासो लिएर सोध्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
माघ ५ देखि एक साता विराटनगरको सहीद मैदानमा चलेको मेलामा अटोमोवाइलका लागि ४२ स्टल निर्धारित थियो । यिनमा मध्ये करीव एक दर्जन स्टलमा हलुका सवारी साधन थिए । मेला सकिएपछि विराटनगरमा बाइकको व्यापार बढेको छ ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:34 PM
अफिस अनि घर
दसकपछि फर्किएको खोलो
निर्मल , कञ्चन, शान्त, शीतल
बाटो विराएरै हिड्न खोज्छ
उनलाई सुनिरहुँ झै लागिरहन्छ
दिउँ दिउँ नै लागिरहन्छ ।।
दुइ किनारका यात्री
मन छाम्ने अध्यायको अवसान
मुर्दा फेरि ब्युँतियो
पाइला फेरि बहकियो
सवारी छुटेको यात्रु
फेरि सहयात्री पाए झै गर्छ
रित्तिएको पत्तो हुन्न
दसकको अन्तराल नाघेर
मध्यरात टिङ टिङ टिङ टिङ
मोवाइल बजेको रहेछ
यु हेभ अ न्यु म्यासेज
माफ गर, मलाइ निन्द्रा लागेन
सक्छौ भने फोन गर
एक्लो मान्छे बहकिएको मन
बिथोल्छ्यौ किन मेरो रात
जानी जानी अबुझ बन्न
फेरि आतुर मन
दसकपछिको एकाकार यात्रा
मुलुक बदल्ने हुंकारका बीच
मागेर होइन अब अधिकार खोसेर लिने
त्यही गरेकी हौ कि कसो ,
मलमसँगै नुनचुक लगाउने
वर्तमान छुटाइ अतितमा पुर्याउने
मुस्कान त्यो उस्तै छ
स्पर्श यो मादक छ
दिउँ दिउँ नै लागिरहन्छ
साथ दिउँ दिउँ नै लागिरहन्छ ।।
(विराटनगर, २१ माघ २ :३२ बजे दिउँसो )
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 2:50 PM
सुनसरीको दुहवी गाविस-१ प्रस्टोकीमा २५ दिनदेखि आउन थालेका गिद्धको संख्या दिनहुँ बढेको छ । चौपायाको दुखाइ निवारकका रुपमा उपयोग गरिने डाइक्लोफेनेक भन्ने औषधि हानिकारक छ । पहिले ठूला सिमलका रुख नासिए, यसले गिद्धको वासस्थान विनास भयो । अनि त्यो ओखती उपयोग गरिएपनि मरेका चौपायाको सिनो खाएर गिद्ध मासिए भन्ने समाचार चार वर्षदेखि नेपाली छापामा बारम्बार आएका छन् ।
दुरदर्शिता नभएका नेताका कारण बिग्रिएको मुलुकमा मान्छेले नै खान नपाएर हराउने बेला भएको छ । वर्षेनी बढेका श्रम शक्तिका लागि रोजगारीको प्रबन्ध छैन । साना ठुला सबै गुटलाई नेता तयार गर्दै फुर्सद छैन । सबैलाइ नेता हुनु परेको छ । देश बनाउने कुरा गरेर आफु बनिने बाटो खोज्नेहरु बग्रेल्ती बढेका बेला चरो जोगाउने कुरा धेरैका लागि असान्दर्भिक लाग्ला । तर, गिद्धका विषयमा धेरै समाचार आए । अन्तत : गिद्ध जोगाउने अयिभान सुरु भयो । दातृ खोजिए । गिद्ध रेस्टुरेन्टका परियोजना ल्याइएका छन् ।
यसरी परियोजना ल्याउनु नराम्रो होइन । तर, दुहबीमा देखिएका गिद्ध उनीहरुको संरक्षणका लागि सहयोगीको भरमा चलाउन थालिएको कुनै यस्तो रेस्टुराले ममचा खान बोलाएर आएको होइन रहेछ । यहा मासू प्रसोधन कारखाना खुलेको रहेछ । त्यसले भैसीको मासू प्रशोधन गरि चीन पठाउन थालेको रहेछ । भैसीको हाड मिल्काउदा त्यसमा छुट्टयाउन नसकेका मासू सुरु सुरुमा कागको आहारा भयो । एउटा भैसीको हाडमा कारखानाले नचाहेपनि करीव चार किलो मासू बाहिर मिल्किने रहेछ । पछि गिद्ध आउन थालेछन् ।
कारखानाले उत्पादन सुरुआतमा पठाउन नपाएर डिप फ्रीजमा राखेको मासू झिक्दै दिन दिनै गिद्धका लागि पस्किदिन थालेछ । देख्ता राम्रो नलाग्ने र गन्ध पनि नमिठो आउने यो ठूलो चरोको जमात यहा खुसी छ । उसले फ्रीजबाट झिक्नेबितिकैको मासू खाँदैन । त्यसलाइ केहीबेर बाहिर राखेपछि चिसो हटछ । गन्ध आउन थाल्छ । अनि खाने रहेछ । कारखानाका सञ्चालकसग कुरा भयो । उनले त्यो कारखानामा चार दर्जनलाइ रोजगारी दिएका रहेछन । उनले नेपालबाट मासू निर्यातका सम्भावना बताए । अनि गिद्धको संरक्षण चाहनेहरुका लागि कुनै परियोजना ल्याइए कारखानाले सघाउने बताए । उनको भनाइमा कारखानाले संरक्षण गरेर सक्दैन । कुरा जायज पनि हो । तर, नजानिदो पाराले संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउन सक्ने रहेछ ।
वातावरणीय संतुलनका लागि भुमिका खेल्ने गिद्धलाइ जोगाउने अभियान मैले नजिकबाट देख्न पाएको छैन । दुहवीमा आएका गिद्ध युराशियन ग्रिफन रहेछन । यिनीहरु समुद्र सतहको ९१५ मिटर आसपास बस्न मन पराउछन । यद्यपि यिनलाइ ३०५० मिटरसम्मको उचाइमा भेटन सकिन्छ । मानिस त बसाइ सरेर यत्रतत्र पुग्छन भने यिनलाइ पनि अतिक्रमणले वास सार्न बाध्य नपार्ने होइन ।
युराशियन ग्रिफनलाइ नेपालीमा खैरो गिद्ध भनिन्छ । नेपालमा हालसम्म आठ प्रजातिका गिद्ध देखिएको हेल्म फिल्ड्स गाइड्सको नेपालका चराहरु भन्ने पुस्तकमा छ । लाम्बर गायर भनिने हाडफोर, इजिप्सियन भल्चर भनिने सेतो, ह्वाइटरम्प्ट भनिने डंगर,स्लेन्डरबिल्ड भनिने सानो खैरो, हिमालय ग्रिफन भनिने हिमाली, युराशियन भनिने खैरो, सिनेरस भनिने राजगिद्ध र रेड हेडेड भनिने सुन गिद्ध । अहिले कोसी टप्पुको सिमल टापुमा गिद्धका ३२ वटा गुँड छन् । केही महिनाअघि त्यसको गणना भएको थियो । तर दुहवीमा देखिएका गिद्धको बथानले निकै लामो यात्रा गरि यहाँ आएको हुनुपर्छ । कारण, यहाँ आएकाको संख्या ६० भन्दा बढि छ । र, यिनमा धेरै वयस्क छन् ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 8:31 PM
दुहवी भन्ने ठाउँ विराटनगरबाट १० किलोमिटर उत्तरमा छ । बजार आइपुग्नअघि सुनसरी र मोरङ जिल्लाको साँध छुटाउने बुढी खोला माथि एउटा पुल छ । छापाहरुमा समाचार पढन पाइयो । गिद्धको बथान आयो । संख्या दिनहुँ थपिएको छ । यो पुलबाट करीव दुइ किलोमिटर पश्चिम एउटा कारखाना चल्न थालेको छ । यसले मासू प्रशोधन गर्छ । राँगो र भैसीको मासू । यहाँ पाहुना लाग्न
गिद्ध आइपुगेछन् ।
चराको विषय मेरा लागि रुचीकरको श्रेणीमा पहिलोमा पर्छ । गिद्धको विस्तृत चर्चा म पछि छुट्टै गर्छु । समाचार पढेपछि मैले आफुलाइ रोक्न सकिन । पुगें । गिद्धका तस्बिर खिचियो । त्यो कारखाना पुग्न पशुपति विस्कुटको
कारखानाबाट अलिकति दक्षिण बुढी खोलाको डिल भएर जानुपर्ने रहेछ ।
जाँदा ध्यान भएन । फिर्दा धुलो उडाएर चार/पाँच जना महिला केही खोजीरहेका थिए । बाइक रोकेँ । राम्ररी हेदा थाहा भयो । खोला किनारमा कुनै धान मिलले ढुटो फालेको रहेछ । त्यो ढुटो निफनेर महिलाहरु धान र चामल खोज्दै रहेछन । मैले क्यामरा झिके । महिलाहरु कराए । फोटो नखिच भने । मैले सम्झाए । खिचेर केही हुँदैन । अनि केही बेरमा उनीहरुले माने । अनि केही तस्बिर खिचे ।
ढुटोको पहाड खोस्रदै यसरी खानेकुरा खोज्नेहरु मुसहर महिला रहेछन । उनीले भने 'हामी धेरै गरिब छौ, ढुटोमा चामल भेटिन्छ । अपराध त होइन नि यसरी खोज्नु ?' प्रश्नले केही असजिलो बनायो । मैले भोकविरुद्धका अभियानको भाषण सम्झे । अरुको केही नबिगारी आफ्नो काम गर्नुलाइ अपराध नमानिने मैले बताए । तस्बिर खिचेँ । अनि केही बेर उभिएर उनीहरुलाइ हेरिरहे । बैंस सिध्दिएका ती महिलाहरु ढुटोमा जीवन खोजिरहेका रहेछन् ।
तस्बिरले अखबारमा स्थान पाएन । केही छैन । मैले नै त्यो तस्बिरको मर्म बुझाउन नसकेको हुनुपर्छ । तर, म आज ब्लगमा तस्बिर, मलाइ लागेका भावनासँगै शेयर गर्दैछु ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:48 PM
अचम्म लागेन । लाग्छ । लाग्नै पर्छ । जाबो सु गर्दा के को विवाद भन्नुहोला । तर, विवाद भयो । आज यो विवादको दोस्रो दिन हो विराटनगरमा । दुइ जना पक्राउ पनि परेका छन् । पक्राउ पर्नेले चाहि सु गरेका होइनन । उनीहरुको सु निकाल्न दवाव परेपछि प्रहरीले समातेको हो ।
यहाँको सरोचियामा मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसको मोरङ पार्टी कार्यालय छ । मधेस भनेको फोरमको पहिलो चीरा हो । यसलाइ भाग्यनाथ गुप्ताले नेतृत्व गर्छन । त्यहाँ गत शनिवार बेलुकी करीव ८ बजे तोडफोड भएछ । तोडफोड मात्र भएन बदमासहरुले आगजनी पनि गरेछन । कारण पहिल्याउदा जे सुनियो , त्यो अचम्मको विषय छ । कसैले सर्वसाधारणका घरअघि 'सु' गरेछ । रिसाएकाहरु खोज्दै गए । पार्टी कार्यालय पुगे ।
आक्रोशको सिकार त्यो कार्यालय भएछ । आइतवार यहाँको स्थानीय अखबार उदघोष दैनिकको समाचारको शिर्षक थियो - मुत्रत्यागको विवादमा तोडफोड ।' ती फटाहाको खोजी सुरु भयो । सबै पार्टीले जानेको कुरा प्रदर्शन र बन्द हो । पहिलो प्रयास त्यही भयो । कार्यकता सडकमा आए । केहीबेर सवारी आवागमन र बजार प्रभावित भयो । अनि घटनाबारे सो अखबर पढेकाहरुलाइ जवाफ दिदा दिदै दिक्क भएका नेताहरुले भाषणमा मजाले पहिले त्यस्तो शिर्षक राखेकामा पत्रिकालाइ सरापे । अनि तोडफोडमा संलग्नलाइ छिटो समातेर कारवाही नचलाए ठूलो आन्दोलनको चेतावनी दिए ।
चेतावनी आएपछिमात्र सक्रिय हुने हाम्रो प्रहरीको बानी । सक्रिय भयो । उसले समातेका युवा एमालेको युथफोर्सका कार्यकर्ता परेछन । साह्रै सोझा । कहिलेकाही ठेक्काको टेण्डरका बेला बाटोमा भेटिने । आफ्नो गरिखाने । विद्यार्थीका आन्दोलनमा बलिया शक्ति मानिएका ।
आज युथ फोर्स अर्थात युवा संघको पालो । उसले बजार बन्द गराएन । तर, प्रहरी अघि यस्तो नारा लगायो । 'झुठो मुद्दा फिर्ता गर । नया संविधान छिटो बना ।' प्रहरीका अनुसार पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गर्नेको नामसहित किटानी जाहेरी परेकाले समातेको हो । जे होला होला । हेर्दै जाउ । अब सु गर्दा कहा गरिदैछ सबैले ध्यान दिनै पर्छ । अन्यथा यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:12 PM
पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको तथ्यांक दुरुपयोग - ५ करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको तथ्यांक चोरी भएको खबर केही दिन पहिले गार्डियन तथा न्युयोर्क टाइम्सले प्रकाशित गरेको थियो । प्रयोगकर्ताको जानकारी विना फेसबुकबाट...
'रेम्बो' अफ नेपाल - 'रेम्बो' नाम त धेरैले सुन्नुभएको होला, कतिले फिल्म पनि हेर्नुभएको होला। आज शहर (भरतपुर महानगरपालिका) बाट गाँउ (प्युठान नगरपालिका- नेपालका धेरै ठाउँ नगरपा...
मेरो मन तँ पत्थर बन् - "चिया चिसो भो" सारा संसारको पीर एकतरफ, आमाको चिया चिसो हुने चिन्ता एकतरफ । बिहान बिहानै पाँच बजे चिया पकाएर खुवाउने आमालाई के थाहा, छोरो भर्खरै निँदाएको हो...
चुनाव, गठबन्धन र साझा पार्टी - चुनावको माहोल छ । सबै तातिएका छन् । आफू पनि केही न केही त गर्नै पर्‍यो । त्यसैले यो लेख । विषय १: गठबन्धन । विषय २:पूराना भर्सस् नयाँ, भ्रष्ट भर्सस् इमानदा...
एउटा गुमनाम कवि - इन्द्र राना 'प्रतीक'
नाम नाम हुन सक्छ नाम सुनाम हुन सक्छ नाम नभएको नाम अनाम हुन सक्छ तर, कसरी नाम अनाम हुन सक्छ ? पुरेतले राखिदिएको नाम चित्त बुझेन ...
चराका बारे के लेख्ने, कसरी लेख्ने
लाग्यो ट्वीटरका १४० शब्दभित्र मलाइ व्यक्त गर्न इच्छा लागेका कुरा अँटाएनन् । केही लेखम् भयो । केहीबेर अघि म बजारको बाटो भएर घर फिर्दै थ...
सेलिब्रिटी गाडीको नेपथ्यबाट
मुस्ताङ निर्माणको कथा पहाड गोरखाका डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएपछि तराईको मोरङमा बनेको गाडी चढेर हिमाल...
Youth for blood (युथ फर ब्लड) को कति राम्रो अभियान !
- 'ब्लड ग्रुप बी पोजिटिभ हो नि ?' - 'हो' - 'तुरुन्तै कञ्चनबारीको नोबेल अस्पताल आउनुपर्‍यो ।' फोनमा सुरज सुव...
सप्तकोसी नदिमा अहिले एउटा समूह जलयात्राको सम्भावना पहिल्याउँदै छ । सुम्निमा जल यातायात प्रालिका नाउँमा । अमेरिकाबाट ल्याइएको भनिएको जेट स...
गुलेली बोकेका बालकहरु देखिए भने कमलबहादुर बानिया उनीहरुलाई सम्झाउँछन् । भन्छन् 'चरा मार्नु हुदैन । हेर त , कति मजाले चिरबिर गर्छन् । हाम...